Inkinga yama-Social Networks: Futhi kuma-Operating Systems? | Kusuka kuLinux
Muva nje Netflix, odume umhlaba wonke isevisi yokusakaza yokubhalisa, evumela amalungu ayo ukuthi abuke noma alande uchungechunge namabhayisikobho ngaphandle kwezikhangiso kudivayisi enoxhumano lwe-inthanethi, ukhiphe idokhumentari ehehayo nenempikiswano ebizwa ngokuthi "Inkinga Yomphakathi" noma ngeSpanishi "Inkinga Yezingosi Zokuxhumana".
Kuyo, okulandelayo kuvezwe ngokuyisisekelo: Okwamanje umlutha ukuthi bakha i- abantu ukuzuza ckhama isikhathi sakho, ukunaka kwakho, idatha yakho, futhi ngenxa yalokho, hlaziya, sebenzisa futhi wenze inzuzo lezi zinto ezifanayo, okungukuthi, shintsha umsebenzisi ngamunye abe ngumkhiqizo onenzuzo yamakhasimende akho, ngaleyo ndlela ngobuqili ephula yethu ubumfihlo nokuphepha kwekhompyutha, futhi kwezinye izimo ngisho nendlela yethu yokucabanga noma yokubona okungokoqobo noma amaqiniso athile aphathekayo.
Ubumfihlo bekhompyutha: Isici Esibalulekile Sokuphepha Kwemininingwane
Kwezinye izikhathi, sithinte izihloko ezihlobene ne- Ukuphepha Kwemininingwane, Ukuphepha Kwamakhompiyutha, Ubumfihlo Nokuvikeleka KwamakhompyuthaKodwa-ke, kubalulekile ukuthi uqaphele ukuthi ekugcineni kwalolu shicilelo uzibuyekeza ngokulandelana ukuqinisa noma ukuthuthukisa ulwazi lwakho kule ndawo. Futhi yilezi:
Impela, uma usuvele ubonile noma ufunde ngakho kushiwo Idokhumentari yeNetflix, lapho ufunda noma ufunda kabusha lezi zincwadi ezedlule ngokucophelela, uthwebula ngendlela ejwayelekile efanayo «Inkinga yama-Social Networks» is extrapolated to degrees different, to phantse bonke Izinhlelo zokusebenza kanye nanoma iyiphi enye into yesimanje neyamanje nokuphathelene, isicelo esivaliwe, insiza kanye nenkundla, futhi yingakho, commercial.
1 Inkinga Yezokuxhumana Komphakathi: Idokhumentari
1.1 Kuyini lokhu?
1.2 Imayelana nani?
1.3 Kusebenza kanjani kuma-Operating Systems?
1.4 Isixazululo noma Izincomo
1.5 Ezinye izindlela: Amanethiwekhi omphakathi akhululekile futhi avulekile
Inkinga Yezokuxhumana Komphakathi: Idokhumentari
"I-Dilemma: Akukaze kube khona idlanzana labadwebi bezobuchwepheshe abalawula kakhulu indlela izigidigidi zethu ezicabanga ngayo, ezenza ngayo, futhi eziphila ngayo. ". Inkinga Yomphakathi.
Ngokusho Netflix, uthe i-documentary ichazwa njenge:
"I-hybrid phakathi kwedokhumentari nedrama engena ebhizinisini lokuxhumana nabantu, amandla abawasebenzisayo nokulutha abakwenzayo kithi: isicupho sabo esihle". Bona isixhumanisi.
Mayelana nedokhumenti eshiwo, kubalulekile ukuthi wazi ukuthi ingumkhiqizo we NguJeff Orlowski, eyayiqondiswa yi- Umqondisi weChasing Ice, nokuthi itholwe njengefilimu enqobayo, a Umklomelo we-Emmy Wezindaba Namadokhumentari.
Ngokubanzi, kungashiwo ukuthi ukukhiqizwa okushiwo kugxile ekudaluleni ngokusobala nangokuqondile, i- imiphumela nemiphumela wezinto eziningi (imisebenzi nezenzo) ezenzeka ngasikhathi se- Amanethiwekhi omphakathi mayelana nomphakathi, ngawodwana nangokubambisana (okwezizukulwane nezenhlalo). Futhi konke lokhu, ngenhloso enkulu yokusiguqula, thina basebenzisi, sibe ngumkhiqizo ongathengiseka kumakhasimende angaba khona wokukhangisa.
Vele, ikwenza kucace bha, ukuthi ezimweni eziningi lokhu kungafinyelela balolonge imibono yethu, izindlela zokuziphatha noma indlela yokubona (ukubona / ukutolika) iqiniso, okomuntu siqu nokweqembu, ngendlela ecashile nengazi lutho abaningi abangahluleki nje kuphela ukubona, kodwa nokwamukela.
Ekugcineni, ithi Amanethiwekhi omphakathi imvamisa:
Nikeza umqondo ongamanga wokuzibandakanya komphakathi.
Khulisa ukukhathazeka nokudangala kwabasebenzisi bayo.
Lungiselela futhi / noma uqinise ukusatshalaliswa kwezindaba ezingamanga (izindaba ezingamanga).
Ithonya endaweni noma emhlabeni jikelele emicimbini ebalulekile njengokhetho noma izindaba ezibalulekile kwezepolitiki, ezomnotho, ezamasiko, ezenhlalo, phakathi kokunye.
Kusebenza kanjani kuma-Operating Systems?
Okwamanje nesimanje Izinhlelo zokusebenza, womabili amakhompyutha wedeskithophu namadivayisi eselula, awakubalekeli lokhu "Inkinga". Isibonelo esihle ngaso sonke isikhathi kuzoba ngesamanje Uhlelo Lokusebenza lweWindows 10, okuyinto, maqondana nezinguqulo zayo zangaphambilini, egxile ekuhlanganisweni kwayo nefu nasekuthuthukiseni amandla ayo kwezenhlalo, okungukuthi, nikela ngezicelo, izinsizakalo noma imininingwane kugxilwe noma kwenziwe ngezifiso kumsebenzisi othile okusebenzayo.
Ukuze wenze lokhu, Windows 10 namanye ama-Operating Systems nezinhlelo zokusebenza noma imikhiqizo yesoftware ephathelene, evaliwe neyentengiso ivame ukusebenzisa ukusetshenziswa kwe- «Telemetría, Spyware, Adware, Cookies», phakathi kwezinye izinto, nokuthi ngaphandle kokubala ukwethulwa, ngamabomu noma cha, kwe iminyango engemuva noma of ukuba sengozini lokho kuvame ukutholakala kuzo, ngokuhamba kwesikhathi. Futhi lokho akuvamile, kwabanye abasebenzisi, kutholwe futhi / noma kuxazululwe ngendlela esobala, esebenzayo nephumelelayo.
Noma kunjalo, uma sivame ukwethula, ngokuvamile, yethu imeyili noma enye into yomuntu siqu ye- ngena ngemvume futhi uvumelanise imininingwane yethu yomuntu siqu, kungenzeka siguqulwe sibe umkhiqizo womthengi omkhulu ngabadali babo, ukuze kuzuze inzuzo yedatha yethu, imininingwane nabantu.
Futhi konke ngaphansi kwe- "Isisekelo esihle", eyani ixhunywe emhlabeni jikelele futhi ivumelaniswe iwavumela ukuthi asinikeze imininingwane ewusizo futhi enembile ngokuthanda kwethu nezidingo zethu.
Isixazululo noma Izincomo
Njengoba kushiwo kwezinye Okuthunyelwe okuhlobene nokunconyiwe Ngaphakathi kwalolu shicilelo, okuhle kuyohlale kungukuthi:
Shicilela imininingwane encane ngangokunokwenzeka iyazwela kuma-Social Networks angasese nawezentengiso, ikakhulukazi emsebenzini nasemndenini, futhi ikhetha ukusetshenziswa kwamaNethiwekhi Omphakathi akhululekile futhi avulekile. Futhi ngangokunokwenzeka, susa noma nciphisa ukusetshenziswa kwezaziso.
Thuthukisa ukusetshenziswa kweSoftware Emahhala noMthombo Ovulekile, ngakho-ke i-GNU / Linux, ukufeza ukukhuliswa kwayo, futhi ngenxa yalokho, sandise ngokwengeziwe, njengenye indlela esezingeni eliphezulu, ephephile nethembekile, kokubili kubantu kanye nasekubambisaneni, kanye nasezinhlanganweni nasezinkampanini zomkhakha kahulumeni nowangasese, wabo bonke amazwe omhlaba.
Joyina i-Free Software Movement noma Imiphakathi ngangokunokwenzeka, obekulokhu kungukuphikisana ngokwemvelo namandla akhulayo nokweqisa eSoftware Industry Corporations, futhi kwesinye isikhathi ngisho ne-Hardware, yize kukonke, kungukuphikisana nakho konke okuphathelene nokuvalwa ezingeni lobuchwepheshe, ngenxa yama-elemental ayo imigomo yefilosofi lapho imithetho yayo eyisisekelo noma imigomo yayo isekelwe kuyo.
Gwema ngangokunokwenzeka (ukunciphisa) ukusetshenziswa kwanoma iyiphi i-Operating System, Application and commercial and proprietary PlatformYize zivame ukuba zinhle kakhulu, futhi ziyizisulu ezikhethwayo zokuhlaselwa ngakunye, ngokuhlanganyela, ukuhweba noma izwe. Ngaphezu kwalokho, abajwayele ukuthola amaphutha noma ukulungisa amaphutha ngejubane elifanele kakhulu labasebenzisi babo.
Ezinye izindlela: Amanethiwekhi omphakathi akhululekile futhi avulekile
Ngeminye imininingwane nge ezinye izindlela lwezinhlelo, izinhlelo zokusebenza, amasistimu namapulatifomu Isoftware yamahhala, Umthombo Ovulekile naku-Mahhala, ungachofoza kokulandelayo uhlu lokho kancane kancane kuyakhula. Futhi uma ufuna ukubona ividiyo enhle ehambisanayo kule ncwadi, sincoma ucingo olulandelayo: UShoshana Zuboff ku-Surveillance Capitalism.
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" emcabangweni ophakathi odalulwe yi Idokhumentari yeNetflix kubizwa «El Dilema de las Redes Sociales», nokuchithwa kwayo okuthe xaxa noma ukuqhathanisa nezinhlelo zokusebenza zamanje nezanamuhla ze-Operating Systems, izinhlelo zokusebenza namanye amapulatifomu okuphathelene, okuvaliwe nezentengiselwano, kuthakazelisa kakhulu futhi kuyasiza, kukho konke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » Inkinga yama-Social Networks: Futhi kuma-Operating Systems?
Isifaniso esihle kakhulu, impela izinhlelo ezisebenzayo zinquma indlela esisebenzisana ngayo namakhompiyutha ethu futhi namanani azo azithonya. Kungakho ngikholelwa kusoftware yamahhala nolwazi lwamahhala yingakho ngisebenzisa iGNU / Linux.
Sanibonani, uJuan Cisneros. Siyabonga ngokuphawula kwakho nangokunikela kwakho. Isoftware yamahhala, Umthombo Ovulekile kanye ne-GNU / Linux kufanele futhi kube yinyakatho yethu ukulandela ezingeni lobuchwepheshe.
Ngiyabonga kakhulu ngenothi. Kuhle kakhulu.
Sanibonani, Hernán. Ngiyabonga kakhulu ngokuphawula kwakho okuhle.
Ikhishwe inguqulo entsha yeFirefox 81